Mandalina ny Endritany Niomerika Ny Fivorian’ny Manampahaizana Miray Anaty Tambajotra ao Melbourne · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2016 13:30 GMT
Tamin'ny 11 Novambra 2016, nihaona tao amin'ny Fivorian'ireo Manampahaizana Miray Anaty Tambajotra ireo Akademisiana sy ireo mpikambana hafa ao amin'ny Sehatra Fahadimy ao Melbourne mba hiresaka mikasika ireo fanamby, fahafahana sy ny loza mitatao amin'ny tontolo iainana niomerika erantany. Nanolotra tetikasa isan-karazany avy amin'ny Fikambanan'ny Ivontoerana Mifandrohy ao amin'ny Oniversiten'i Melbourne ilay fivorian'ireo manampahaizana. Endri-javatra mahazatra ny maro avy amin'ireo tetikasa nohalalinina ny endritany niomerika mavitrika eo an-toerana .
Fiaingàna goavana no fahitàn'i Duttion azy io raha oharina amin'ireo hevitra sasany tany aloha momba ny sehatra fahadimy ho toy ny mitovy amin'ireo bilaogera.
[Afaka jerena eto ny sary sy fanamarihan'i Dutton.]
Ohatra iray amin'ny faharefoana mety ateraky ny Aterineton'ny Zavatra ilay nanjo ny lohamilina mpitsinjara anaran-tsehatra tao Etazonia, fanafihana fibahanana tolotra tamin'ny Oktrobra 2016 notarihina piraty informatika izay nikirakira ireo torohay alefan'ny fitaovana fampiasa ao an-trano sy ny toy izany.
Voafaritr'ireo fizahàna ny endrika ara-barotra sy tsy ara-barotra ny Toekaren'ny Fifampizaràna ao Melbourne, na dia ireo eny an-tsisiny aza:
Inona no zaraina any amin'ny sisiny ao Melbourne?@jennykennedy #NSS2016
Uber, iray amin'ireo diso malaza indrindra ho mpanelingelina ny toekaren'ny fifampizaràna , no iray tamin'ireo antony maro nankarary ny sain'ny mpamily fiarakaretsaka mahazatra. Ny Mamily Ho An'ny Fiovàna dia nanamboatra fampiasa iray mba hanampy amin'ny fahasalamana ara-tsain'ny mpamily. Hampiasa karazana hetsika fohy natao ho an'ny finday maro avo lenta mandritra ny fotoana fiandrasan'izy ireo. Mazava ho azy fa ny mpamily Uber dia afaka koa haka tombony amin'izany tolotra izany, satria miatrika rarintsaina maro mitovy amin'izany ary koa ireo sasany izay tokana ho an'ny toe-javatra iainan-dry zareo.
Mitrandraka ny fahaizamanaon'ny teknolojia ho fanohanana vondrom-piarahamonina ratsy tohana ny fahasalamana ara-tsain'ireo mpamily fiarakaretsaka ao amin'ny Mamily Ho An'ny Fiovàna @MelbNSI #NSS2016
Ampiana an'ireo sehatra fiadian-kevitra erantany an-tambajotra sy ny sehatra fifanakalozan-kevitra momba ny herisetra mihatra amin'ny lahy sy ny vavy, “Tsy Ilay Iray Ihany” no namorona ilay tranonkala Aostraliana izay afaka izaràn'ny vehivavy ny zavatra niainany tamin'ny herisetra an-tokatrano:
Matetika tsy mamboraka amin'ny olon-kafa ny fanararaotana nanjo azy ireo vehivavy mijaly amin'ny herisetra an-tokatrano. Toerana iray masina an-tambajotra no atolotry ny Tsy Ilay Iray Ihany #NSS2016 #VAW
Nisy fandraisan'andraikitra sy tetikasa maro hafa ihany koa izay mety ho hita ao amin'ny tranonkala MNSI, ahitana ny fahasalamana, Fahitalavitr'ireo Indizena any an-tany lavitra, tontolo iainana, fanabeazana, fanontam-pirinty 3D, ary foto-drafitrasam-piarovana.
Velakevitra farany ho an'ny androany @fvetere @jmcvernon @kwanghui @VictoriaJPalmer Lars Coenen ary @Nirmalathas mifanakalo hevitra momba ny Hasarobidy sy ny Anjara asan'ny Angon-drakitra #NSS2016
Nandritra ny fivoriana iray momba ny hasarobidin'ny angon-drakitra, Lars Coenen avy amin'ny Oniversiten'i Lund ao Soeda dia niresaka mikasika ny lanjan'ireo angon-drakitra goavana amin'ny fanamboarana tanàna marani-tsaina. Saingy nampahatsiahy zava-manahirana iray niainana nandritra ilay fivoriana izy:
‘Fa misy ihany koa tosi-bohon-tànana avy amin'ireo mpampiasa raha ny mikasika ny maha an'ny tena manokana an'io angon-drakitra io ihany’ – Lars Coenen #NSS2016 #tanànamarani_tsaina #Melbourne
Afaka idirana amin'ny #NSS2016 ny resaka Twitter avy amin'ny fivorian'ireo manampahaizana.